Ọnọdụ dị ugbu a nke mbubata na mbupụ China
Na nkeji iri na ise nke 2020, mbubata na mbupu nke obodo m dara site na 6.4%, nke jiri pasent 3.1 karie onwa abuo gara aga. Na Eprel, ngụkọta uto nke azụmaahịa mba ofesi weghaara site na pasent 5.7 site na nkeji nke mbụ, na uto r ...
Ojiji na nlezianya nke [bis (2-chloroethyl) ether (CAS # 111-44-4)]
[Bis (2-chloroethyl) ether (CAS # 111-44-4)], dichloroethyl ether na-ejikarị eme ihe dị ka kemịkal kemịkal maka imepụta ọgwụ ahụhụ, mana oge ụfọdụ enwere ike iji ya dị ka ihe mgbaze na nhicha nhicha. Ọ na-agbakasị anụ ahụ, anya, imi, akpịrị na ngụgụ ma na-akpata nkasi obi. 1. Ho ...
Companylọ ọrụ anyị nakweere mkparịta ụka nyocha CCTV "Brand Power".
N’ọnwa Machị 2016, ụlọ ọrụ anyị nabatara mkparịtaụka nke CCTV si ‘’ Brand Power ’’. Onye a ma ama na-akwado CCTV a Wang Xiaoqian, wee webata nkà ihe ọmụma mmepe ụlọ ọrụ na ụdị ọrụ. Shijiazhuang Chenghexin Chemical Co., Ltd ....